3 Mpaghara Mgbanwe maka Nchọpụta Ngwa-Akụkụ na 2017 | Martech Zone
Ọ dị mma ịsị na 2016 ghọrọ ọkwa ajụjụ maka oge ọ bụla (QPS) maka Nchọpụta Ngwa-Akụkụ (DSP) na mgbasa ozi mgbasa ozi na-azụ ahịa. Ma DSP ọ nwere ike ịme ngosipụta nke ngosi 500,000 / nke abụọ ma ọ bụ 3 nde echiche / nke abụọ, nnweta maka ịzụta zụrụ obere nke asọmpi dị iche iche na-asọ mpi n'ofe nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi niile.
Taa, ọtụtụ ụdị na-eche na DSP ga-ejikọ aka ya na isi mgbasa ozi niile mgbe ị na-ebute ọwa mmiri ga-erute opekata mpe 1 nde QPS. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ikpo okwu anaghị adị na njikọta mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ site na ijikọ ọnụ BidSwitch na ịpị na ọkọnọ na-efu efu.
Yabụ, mgbe a bịara n'ihe gbasara ngwaọrụ na ndị ọrụ mgbasa ozi na-elekwasị anya, gịnị bụ ụfọdụ ndị na-abịa dị iche iche na-abịanụ nke ndị DSP ga-akwụ ụgwọ na 2017? Ego ole ka mmetụta ga-ebu ibu 1000 Fortune ụdị mgbasa ozi nwere na-agbanwegharị ọrụ DSP ọhụrụ?
Ihe ị ga-achọ na 2017:
Ihe ndi otu mbu, mmuta igwe, ndi na-acho ahia maka ihe ngosi mmemme, algorithms nke ndi mmadu, na mmekorita di nma na teknụzụ ahia ahia - dika IBM Unica na Adobe Neolane - adighi eme ka ihe ndi DSP puta. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime isiokwu nwere ikike ịghọ ndị iche maka ụlọ ọrụ AdTech.
Taa, data nke mbụ bụ otu n'ime akụ kachasị elu ọ bụla nzukọ nwere ike ịnwe. Brandsdị ndị ọzọ na-amalite ịghọta uru nke data nke mbụ site na ijikwa ngalaba, ịme ihe ngosi dị ka ihe atụ, na ịkwanye data ndị na-ege ntị na DSP iji mee ka ịchọta ndị ahịa ma ọ bụ mgbasa ozi na-achọ oge. Agbanyeghị, ijikwa ya, itinye ya n'ọrụ, na itinye ya n'ọrụ n'oge iji zụọ ahịa mgbasa ozi na-abụkarị ihe ịma aka.
Dịka, ọtụtụ ụdị ghọtara mkpa nke data nke mbụ. Akụkụ a ma na-agafe na oghere a n'ime afọ ole na ole gara aga. Ọ na-eguzo dị ka ihe akaebe nke oke mkpa nke a bụ Nhazi usoro data (DMP), ngwa ndi na ege nti na ihe omuma data nke otutu otutu (2 gaa 3 n'otu nnukwu ụlọ ahịa mkpọsa).
N'uche m, usoro na-esote n'ụwa nke data mbụ na-agụnye akpaaka na-arụ ọrụ site na mmụta igwe na njikarịcha oge dabere na ntanetịime data sitere n'ọtụtụ isi. Ndị DSP nwere DMP siri ike na ụlọ na njikwa njikwa ndị na-ege ntị ga-apụta ìhè karịa ndị nwere ụdị azịza nke bidder. Anyị ga-ahụ nnukwu ụlọ ọrụ Fortune 1000 bụrụ ndị nwere ọkaibe karịa na mmemme ma bido imeghari DSP ha site na iji ngwa mmụta ngwa ọrụ nke arụ ọrụ iji gbanwee ọtụtụ data nke mbụ.
Brandsdị ụdị nke 1000 na-amalite ito eto n'ụzọ ha si enweta data buru ibu - mmejuputa software dị ka Hadoop na Kafka iji nweta ihe niile kwere omume. Brandsdị ndị a Fortune 1000 na-atụle itinye ego data a n'ụzọ na-enyere ha aka ịghọta ndị ahịa ha nke ọma, yana imeziwanye "mkpalite" ha ma ọ bụ ahịa ha na-ebute site na ntanetị. Ọtụtụ ụdị ndị buru ibu na-amalite ịhụ igwe na-amụ ihe dị ka ihe dị iche na nke nwere oke uru.
Ma ahịa akpaaka ma ọ bụ ịzụ ahịa mgbasa ozi, mmụta igwe na-enye ọtụtụ ohere. O bu ihe nwute, ebe ahu ka m nwere onu ahia di elu na oge di oke mkpa iji nweta oru nke okike a.
Banye na DSP
Dika AdTechs bidoro jikọtara ya na DSP, ha na - ahụ onwe ha na ọnọdụ ebe ọ dị ha mkpa ịkwalite ịkọwa data data ha. Ọzọkwa, ọ ga-adị ha mkpa ịmalite ịmekọrịta ndị na-ege ha ntị na-enweta ozi banyere usoro ihe eji eme ihe nke nnukwu ụdị klaasị na-eji eme ihe.
Na mgbakwunye, anyị ga-ahụkwu ụdị UBX API Ọnụ ụzọ dị iche iche na-ejikọta ụdị ikpo okwu igwe ojii dị ukwuu site na IBM, Adobe, na SAS nke nyiwe nwere ma ọ bụ 3rd party DSP na nyiwe data nke ndi na ege nti. Dabere na omume a, enwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị Adobe ụdị na-echere ime na 2017. ieslọ ọrụ ga-aga site na nnweta - dị ka Adobe zụrụ nke DemDex na TubeMogul ịgbakwunye DSP na DMP na igbe ọrụ ha.
Yabụ, gịnị ka ihe a niile pụtara?
Ọ dị ka afọ ọzọ na-esiri ike maka DSPs dị ka echiche QPS na-emetụta ebumnuche ngwaọrụ, na-akọ akụkọ, na-elele ya yana ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ. E nwere mpaghara AdTech ebe nnukwu ụdị ga-enwe oke okwu na etu ebili ọrụ DSP na-esote ga-adị. Dịka onye na-azụ ahịa, enwere m mmasị ịhụ ihe na-esote.
Tags: ad-techmgbasa oziakada datadataina akụkụ ikpo okwudmpNkejidata mbụmgbasa ozi ịzụta
Ivan Roubtsov bụ onye isi ndị ahịa ahịa na ụlọ ọrụ Client Spectrum - ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ahịa na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa. Dịka CMO, Ivan bụ ọrụ maka Ndị ahịa dị iche icheAhia ama dika ewu ulo ahia banyere ahia ahia. Ọ rụburu ọrụ na ụlọ ọrụ AdTech maka ụlọ ọrụ dịka AdGear na Acquisio. Ivan bụ onye na-eso ụzọ na-eso ihe niile AdTech metụtara.